यसरी सम्भव भयो सन्दीपको आइपिएल डेब्यु
Posted: 2018-05-13 22:35:02
इन्डियन प्रिमियर लिगमा दिल्लीका लागि बैंगलोरविरुद्धको खेल खास अर्थपूर्ण थिएन् किनकि दिल्ली प्रतियोगिताबाट बाहिरिइसकेको थियो। उसले बैंगलोरलाई पराजित गर्नुको अर्थ बैंगलोर पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिनु मात्र हुन्थ्यो। युवा खेलाडीको अनुबन्धले चर्चित बनेको दिल्लीले धेरै युवा खेलाडीलाई ११ खेलसम्म मैदान बाहिर नै राख्यो। त्यसमध्ये पनि नेपालको तर्फबाट एक मात्र आइपिएलमा सहभागी युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामीछाने वर्ल्ड क्लास बलर रहेको चर्चाका बाबजुद दिल्लीले उनलाई मैदानमा उतार्न आँट गरेको थिएन। तर शनिबार ७.३० बजेसम्म पनि दिल्लीले प्लेइङ इलेभनमा सन्दीपलाई मौका दिनेरनदिने अन्योल थियो। दिल्लीमा कसलाई खेलाउने या नखेलाउने निर्णयको ठूलो अधिकार प्रशिक्षक रिकी पोन्टिङसँग थियो। पोन्टिङले खेलाडीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा युवा खेलाडीलाई डेब्युको मौका दिने प्रस्ताव कप्तान श्रेयष अयर समक्ष गरेका थिए। तर त्यसअघि नै सन्दीपको नाम भने टिम म्यानेजमेन्टबाटै प्रशिक्षक र कप्तान समक्ष पुगेको जनाइएको छ। सन्दीपको टिममा मौका मिल्ना साथ सन्दीपलाई आइपिएलसम्म पुर्‍याउन ठूलो भूमिका खेलेका माइकल क्लार्कले ट्विट गरेका थिए। उनको ट्वीटमा सन्दीपले आफूलाई प्रमणित गर्ने विश्वास गरेका थिए। क्लार्कले पनि पोन्टिङसँग दुई खेलअघिबाटै सन्दीपको विषयमा चासो राख्दै आएका थिए। मोदी​को भाषण संयोग कि रणनीति? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको नागरिक अभिन्नदनपछि राष्ट्रिय सभागृहमा मन्तव्य राखिरहेका थिए। उनले भारतलाई काठमाडौंसम्म रेलमार्फत् जोड्नका लागि डिपीआरको काम सुरु भएको बताएलगतै आइपिएल प्रसंग रणनीतिक रूपमा निकाल्दै भने, ‘अहिले सायद नेपालमा यसको चर्चा कति छ मलाई थाहा छैन, यी दिनमा भारतमा आइपिएल क्रिकेट खेल भइरहेको छ र नेपाल पनि अब आइपिएलमा जोडिएको छ। यो यात्राका धेरै पक्षमा तपाईंहरू धेरै परिचित हुनुहुन्छ। मलाई भनिएको छ, पहिलो पटक नेपालका एक नौजवान खेलाडी सन्दीप लामिछाने आइपिएलमा भाग लिइरहका छन् । म आशा गर्छु, आगामी दिनमा क्रिकेट मात्र होइन, अन्य खेलको माध्यामबाट पनि हाम्रो जन–जनको सम्बन्ध मजबुद हुँदै जानेछ।’ मोदी कूटनीतिक रूपमा निकै चतुर मानिन्छन्। उनलाई राम्रोसँग थाहा छ( सामाजिक संजाल तथा विभिन्न क्षेत्रमा उनको भ्रमणलाई लिएर तीब्र असन्तुष्टि छ। तर उनले उक्त असन्तुष्टिलाई खेल कुटनीतिमार्फत् केही मथ्थर पार्ने कोसिस गरेको प्रस्ट हुन्छ। उनले आफूलाई भनिएको सूचनाका आधारमा जसरी राष्ट्रिय सभागृहमा सन्दीपको नाम लिए, उनलाई सूचना दिने व्यक्तिले नै जिएमआरको तर्फबाट आइपिएल हेरिरहेको व्यवस्थापन समक्ष कुरा पुर्‍याइसकेका थिए। एक त दिल्लीका लागि खेलको ठूलो महत्त्व नहुनु तथा अर्कोतर्फ विश्वकै शक्तिशाली नेताको शीर्ष १० मा पर्न सफल मोदीले आइपिएलमा सन्दीपको चर्चा काठमाडौंमा त्यतिकै गरेका थिएनन् भन्ने कुराको प्रमाण अन्तिम समयमा सन्दीपको डेब्युले नै प्रमाणित गरेको छ। अब के हुन्छ? विभिन्न अड्कल मुताविक सन्दीपले दिल्लीबाट डेब्यु गरे। त्यो पनि निकै राम्रो स्पेलमा प्रतियोगितामा दिल्लीले उनलाई आफ्नो इनिङको पहिलो बल नै थमाएको थियो। बैंगलोरले टस जितेर दिल्लीलाई पहिलो ब्याटिङको निम्ता दिएको थियो, जहाँ दिल्लीले निर्धा्रित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १८१ रन बनाएको थियो । उसका लागि रिसव पन्तले सर्वा्धिक ६१ रन बनाएका थिए। जवाफी लक्ष्य पछ्याएको बैंगलोरविरुद्ध पहिलो ओभर लिएर आएका सन्दीपले लोभलाग्दो बलिङ गरेका थिए। खेलको पहिलो ओभरमा ६ रन (४ रन बाई) खर्चिएका सन्दीपले तेस्रो ओभरमा ५ रन तथा सातौँ ओभरमा ८ रन खर्चिएका थिए। आफ्नो अन्तिम ओभरका रूपमा १२औँ ओभर लिएर आएका सन्दीपले पहिलो छक्कासहित १० रन दिए । समग्रमा उनी उक्त खेलमा सर्वा्धिक किफायती बलर बन्न सफल भए। अब दिल्लीसँग प्रतियोगितामा दुई खेल बाँकी छ र प्रदर्शनलाई आधार मान्ने हो भने आगामी खेलमा सन्दीप निर्विकल्प टिमका सदस्य हुन्। अर्को खेल चेन्नईविरुद्ध दिल्लीले मे १८ मा प्रदर्शन गर्दा प्रतियोगिताको अन्तिम खेलका रूपमा दिल्लीले मुम्बईविरुद्ध जारी आइपिएलको अन्तिम खेल खेल्नेछ। यदि दुवै खेलमा सन्दीपले मौका पाए आगामी आइपिएलमा आफ्नो उपस्थितिलाई प्रमाणित गर्नेछन्। समग्रमा सन्दीपको आइपिएल चर्चा उनको माघ १४ को अक्सनबाट आइपिएलको जारी सिजनको अन्तसम्म कायम छ। त्यसैले प्रतियोगितामा उनको प्रदर्शन नेपाली खेलकुदका लागि ’टर्निङ प्वाइन्ट’ मान्न सकिन्छ।
ग्राण्डी अन्तर्रा्ष्ट्रिय अस्पताल पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको मेडिकल पार्टनर
Posted: 2018-10-15 15:49:11
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - ग्राण्डी अन्तर्रा्ष्ट्रिय अस्पताल पोखरामा पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको मेडिकल पार्टनरका रुपमा रहने भएको छ ।ग्राण्डी अन्तर्रा्ष्ट्रिय अस्पतालमा आज आयोजित पत्रकार ...
राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि एपिएफ क्लबलाई
Posted: 2018-10-14 11:18:53
सुनाखरी न्युज/ बागलुङ - नेपाल भलिबल सङ्घद्वारा बागलुङको गलकोटमा आयोजित २२ औँ राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबले जितेको छ ।आज भएको फाइलन खेलमा नेपाल पुलिस ...
ए डिभिजन लिग : हिमालयन शेर्पा र एपिएफ बराबरीमा
Posted: 2018-10-12 14:29:09
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - सहिद स्मारक ’ए’ डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पा क्लब र नेपाल एपिएफ क्लबले बराबरी खेल्दै अंक बाढेका छन। शुक्रबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेल गोलरहित बराबरीमका सकिएको हो । ...
नेपालको शानदार प्रदर्शन, दुई ओभरमै हार्‍यो चीन
Posted: 2018-10-10 10:32:53
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - आईसीसी टि–२० विश्वकप एसिया उपक्षेत्रिय छनोट प्रतियोगितामा नेपालले चीनलाई १० विकेटले पराजित गरेको छ। मलेसियाको बायुमास ओभल मैदानमा भएको खेलमा चीनको २७ रनको चुनौती नेपालले दास्रो ...
विश्वकप टी- ट्वान्टी छनोटः भुटान विरूद्द नेपालको फराकिलो जित, भुटान ३३ रनमा सिमित
Posted: 2018-10-09 11:48:10
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - मलेसियामा जारी विश्वकप टी–ट्वान्टी छनोट क्रिकेटमा नेपालले लगातार चौथो जित हात पारेको छ । मलेसियाको बांगी मैदानमा नेपालले मंगलबार भुटानलाई १ सय १७ रनको फराकिलो अन्तरले ...